> Resource> iPhone> Free iPhone ndabere extractor: Wepụ iPhone Ndabere maka Free
Free iPhone ndabere extractor
iBackup onyenlereanya bụ a free ngwá ọrụ nke-enye gị wepụ iPhone ndabere faịlụ na selectively azọpụta ha na kọmputa gị. Ị nwere ike iji ya wepụ kọntaktị, akpọ akụkọ ihe mere, ozi, ndetu, olu memos, photos, ibe edokọbara na ngwa. Ọ nwere ike na-eji maka nkịtị iTunes ndabere. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya maka ezoro ezo ndabere faịlụ, i kwesịrị nweta nkwalite ya ka a Pro version, nke a na-ọnụ na $49.95.
Mma free iPhone ndabere extractor ọzọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ ọzọ data si ndabere, ị nwere ike ịgbanwee gaa na Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). Ọ ka na-ị wepụ faịlụ ruo 11 ụdị. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwekwara ike iji ya na-kpọmkwem iṅomi gị iPhone, iPad na iPod aka ka naghachi ehichapụ data site na ya
Devices akwado iTunes ndabere
iPod emetụ 5/4 iTunes ndabere
kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, kalenda, na ndetu, na-echetara, ibe edokọbara, igwefoto mpịakọta, foto iyi, ozi Mgbakwụnye, olu memos.
Ọ nwere ike na-ahụ ma ẹdude na-ehichapụ data na nkwado ndabere na mpaghara.
kọntaktị, akpọ akụkọ ihe mere, ozi, ndetu, olu memos, photos, ibe edokọbara, ngwa
Ọ nwere ike na-chọta ẹdude data na nkwado ndabere na mpaghara.
Naputa site na iDevice kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, kalenda, na ndetu, na-echetara, ibe edokọbara, igwefoto mpịakọta, Photo Ọbá akwụkwọ, foto iyi, ozi Mgbakwụnye, olu memos
Ahịa $ 69.95 (Full version)
Download Windows version, Mac version iBackup onyenlereanya
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac) na-ahapụ gị naghachi ma wepụ ọzọ, dị ka ozi olu ozi olu, WhatsApp ozi akụkọ ihe mere eme na WhatsApp ozi Mgbakwụnye. The ikpe mbipute bụ free. Ị nwere ike ibudata ya n'okpuru nwere a na-agbalị mbụ.
Olee otú iji a free iPhone ndabere extractor
Nkebi nke 1: Wepụ iPhone ndabere na 2 nzọụkwụ
Part 2: Kpọmkwem naghachi ehichapụ data gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka
Nzọụkwụ 1. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ma wepụ ya
Wondershare Dr.Fone Maka iOS na-enye gị abụọ iche iche nke mgbake mode: Naghachi si iOS Ngwaọrụ na-agbake site iTunes ndabere File. Na akụkụ a, ka na-agbalị nke abụọ na otu. Ị nwere ike ozugbo họrọ naputa site na iTunes ndabere File, mgbe launching usoro ihe omume. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị na-egosi na-akpaghị aka na window n'okpuru. Họrọ onye ị chọrọ wepụ na pịa Malite iṅomi iji nweta ya amịpụtara.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake data si ndabere
Usoro ihe omume ike wepụ dum ndabere faịlụ na sekọnd ole na ole. Mgbe ya, ị nwere ike ịhụchalụ niile ọdịnaya na ndabere. Ego ha na nne Mmetụta ihe ị chọrọ ịzọpụta. Wee pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị. E wezụga ẹdude data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, Wondershare Dr.Fone maka iOS nwekwara ike chọta ehichapụ data si ndabere, nke free iPhone ndabere extractor apụghị ime.
Nkebi nke 2: Kpọmkwem naghachi ehichapụ data gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka
Nzọụkwụ 1. Bilie gị iDevice ejikọrọ na scanned
Ebe a, ka na-ihe iPhone dị ka a na-agbalị. Nke mbụ niile, jikọọ ya na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone 5S / 5C / 5 / 4S, ị ga-ahụ a window dị ka ndị a. Dị pịa na Malite iṅomi na-amalite ịgụ isiokwu ya.
N'ihi na site na iji iPhone 4 / 3GS, na windo ị ga-ahụ ga-adị ka nke a, na mkpa ka i soro nkọwa na window ịbanye ngwaọrụ scanning mode. Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone. Ọ bụ ezigbo mfe. Dị nnọọ ịchịkwa oge mgbe ị na-eme nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake data na gị iPhone
Usoro ihe omume ga-ewe gị a obere oge ka ​​iṅomi gị iPhone. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị ga-ahụ a Doppler N'ihi ya, ebe niile recoverable data na-egosipụta na edemede dị ka igwefoto mpịakọta, foto iyi, kọntaktị, ozi na otú pụta. Preview na nne Mmetụta ihe na ị chọrọ, mgbe ahụ ịzọpụta onye ị chọrọ ka gị na kọmputa site na ịpị Naghachi bọtịnụ.
Ihe kacha Ngwọta nyefee Music site na kọmputa na-iPhone
3 Ụzọ nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka iPhone